5-Fursado Ganacsi Aad Bilaabi Karto Maanta, Waliba Adigoo Gurigaaga Jooga! | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed — December 17, 2018
Waxaa laga yabaa inaad aqoon gaar ah u leedahay qaababka loo ganacsado. Kawaran haddii aad tahay gabar wax soo baratay oo soo dhammaysatay waxbarashadeeda sarre ee jaamacada, hadana ah hooyo guriga joogta oo caruurteeda kuriso? ama aad tahay nin wax soo bartay hadana aanan haysanin shaqo amaba haayo shaqo uusan ku qanacsaneen. Ma jiraa fursado aad ku noqon karto ganacsade ama aad ku abuuri karto fursado dhaqaalle. Qoys walbo wuxuu u baahanyahay innuu helo ilo dhaqaalle, balse haddii la waayo waxaa adkaan karayso bixinta korontada guriga, waxbarashada caruurta iwm. Qofwalbo waxaa masuuliyad ka saaran tahay innuu abuuro nolol ku salaysan ‘xasilooni dhaqaalle’.
Siddoo kale gabadha waxay u baahantahay inay caawin karto odaygeeda xittaa iyadoo guriga fadhida. Kawaran haddii aad tahay hooyo caruur haysato oo aanan la qabin?
Inaad noqoto shaqsi loo shaqeeyo waa wax macquul ka ah noloshada aadanaha. Haddii aad doonayso inaad noqoto shaqsi loo shaqeeyo marka horre adiga is xil saar oo waxaad isku xil saartaa in masuuliyad ay ku saarantahay habba yaratee. Ganacsiga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan oo dadka ay ku taajiraan.
In aannu qofku ku dedaalin in uu dhididkiisa cuno waa wax dadkeenna ku badan oo xittaa bulshadeenna iyo nafteenna daayo, uu waddankeeni ka horumari layahay.
Islaweyni waa tan inoo diidday in aynnu wax la soo baxno, dadkeenu ayna shaqo abuuran ee aynu dhammaanteen doonayno in aynu helno kursi wareegaya, guri weyn oo cad, nolol dhammaanteed iyadu iswadda, habaysan oo aynaan inagu ku dhididin waa taa dhammaan dhalinta wax baratay fadhiisisaa maqaaxiyaha ee horumar u diidday, waa taa dhallinyartii dalkaan u dhalatay ay badaha isugu guraayaan, Waa taa shaxaadka badisay ee qof waliba aannu gacmihiisa kala furayn, mararka qaar aya aad is oranaysaa dadkaan tolow yaa ku yirri “ha cunina dhididkiina waxna halla soo bixinna”.
Ahaaw, rag ama dumar midkey doontaba: kawaran haddii aad tahay shaqo la’aan? Yaad ka sugaysaa innuu shaqo kuu abuuro? Aaway dadnimadaada aad ku abuuran lahayd shaqo fiican oo isku filnaansho leh. Waxwalbo waad noqon kartaa haddii aad garato qofka aad tahay!!
Waxaa jira su’aalooyin badan oo u baahan inaad u hesho jawaabo sax ah. Garashada bini’aadmigu wax garto shan marin ayay u soo maraan maskaxdiisa. Waa aragga, maqalka, urta, dhadhanka iyo dareenka jirka. Shantaas ilood waaye kuwa dhalashadeenna illaa dhimashadeenna maskaxdeenna iyo maskaxdeenna ku waraabiya aqoonta ay u ooman tahay. Si gaar ah marka laga hadlaayo aqoon-kororsiga, saamiga weyn waxaa la siiyaa kaalinta ay dareenka aragga iyo kan maqalku ka qaataan.
Halkaan waxaan kusoo koobayaa fursadaha ganacsi ee aad bilaabi karto maanta. Siddoo kale fursadahaan ganacsi waa kuwa aanan kaaga baahneen qarashaad badan ee waa kuwa u baahan dadaal badan iyo inaad ka tagto waxwalbo oo keeni karo islaweyni. Ogaysiis, fursadahaan ma ahan oo kali inaad shaqo la’aan tahay, xittaa adigoo shaqeysto ayaad bilaabi kartaa waxayna kuu tahay sharaf-dheeri ah. Fursadahaan waxaa kamid ah:
Ganacsiga internetka ‘e-commerce’
Ganacsiga internetka ayaa ah ganacsi maanta baahi weyn loo qabo, waxaana marwalbo marka kasii dambeysa kor usii kaca baahida loo qaba ganacsiga internet-ka wax loogu kala iibsado. Wadankeenna mustaqbalka dhaw ganacsigaan aad ayuu u kobci doonaa, waxaana la sheegaa in wakhtiyadaan dambe soo ifbaxaayaan dad bilaabay ganacsiga internet-ka oo aragtida mustaqbalkana wax badan iska bedeli doona xaalada dalka uu ku jiro maanta.
Faa’idooyinka uu leeyahay bilaabida ganacsiga internet-ka ma ahan wax halkaan lagu soo koobi karo. Marka aad leedahay xarun dukaan ah, waxaa laga yabaa in macaamiishaada aysan aqoonin goobta ganacsigaaga, balse ganacsiga Internet-ka ayaa ah goob cidwalbo oo daafaha dunidda kunool soo booqan karto. Waxaad u baahantahay oo kali inaad abuurato Platform aad muhiim u ah, oo soo jiidan karo indhaha dad badan oo xiiso u qabo ganacsigaaga.
Faa’idooyinka kale uu xambaarsanyahay aas-aasida ganacsiga internet-ka ayaa ah, kaagama baahno inaad qarashaad badan ku bixiso. Laakiin si ganacsigaaga kor u kac u sameeyo waxaad u baahantahay xayeysiin xoogan oo qarash ah, si bulshada caalamka ay kuu aqoonsanadaan halka laga heli karo badeecadahaaga.
Arrimaha muhiimka ah inaad ogaato marka aad bilaabayso ganacsiga noocaan oo kale waxaad u baahantahay tartanka caalamka ka jira iyo waliba saameynta lacagaha suuqa. Lacagta suuqa’ ‘waa halka maaliyada, damaanad sare iyo miisaaniyada aadka u gaaban’. Guud ahaan marka la raba in la sharaxo suuqa lacagta waxaan isdhihi karaa in horey loo fahmi karo macnaha guud ee ay xambaarsantahay suuqa lacagta. Lacagta mararka qaar waxay noqotaa ‘badeeco si lacag kale loo abuuro.
Haddii aan u sameyno macnayaal kala duwan sidda haddii ay shirkadaada soo iibsato agabyada sidda kuraasta, makiinadaha, kombuuterada iwm, waxay ka dhigantahay inaad qarash ku bixisay si aad agabyadaasi ugu abuurto lacag kale.
‘macnahiisa ma ahan inaad sii iibinayso ee waa sahaydii aad dagaalka ku geli lahayd.
Hadaba, dhammaan qodobadaasi ma ahan suuqa lacagta ee waa ‘xoraynta ganacsigaaga, si aad u yeelato meel aad ku qabsato hawl maalmeedkaaga. Qodobadaan ayaa ah xaqiiqda rasmiga ah ee ‘Suuqa lacagta’ sidda biilasha hantida, waraaqaha ganacsiga, aqbalaadda baanka, xisaabaadka, caddaynta deebaajiga ‘deposit, biilasha sarrifka, heshiisyada dib u celinta, miisaaniyada federaalka, deynta mudada gaaban ah iyo hantida qaaliga ah.
Sidoo kale, suuqa lacagta wuxuu ka koobanyahay haay’adaha maaliyadeed iyo ganacsatada kuwaasoo hawshooda salka ku haysa deynta iyo amaahda lacagaha. Ka-qaybgalayaashu waxay deynsanayaan oo ay amaahiyaan muddo gaaban, sida caadiga ah ilaa laba iyo toban bilood.
Arrimaha kale ee u baahan inaad wax badan ka ogaato marka aad doonayso inaad bilaawdo ganacsiga internet-ka waxaa kamid ah isbedelka lacagaha dunidda. Marka aad badeeco kasoo iibsato dalkale inta aadan iibinin saameynta ay kugu yeelan karto isweydii haddii aad wadan kale qof jooga ka iibiso.
Ganacsiga internet-ka ayaa ah mid dhammaan hawshiisa aad qaban karto adigoo gurigaaga fadhiyo, safaro inaad gasho uma baahnid oo qarashka kaaga bixi lahaa safarada wuu kuu baaqanayaa. Adigoo gurigaaga fadhiyo ayaad badeecadahaaga dalbani kartaa, hadana adigoo gurigaaga fadhiyo ayaad sii iibin kartaa badeecadihii aad soo iibsatay.
Soomaalida ayaa ah dad macmacaanka jecel sidda xalwada, shushumoow, kashaatada, rootiga iwm. Haddii aad taqaano sidda loo sameeyo macmacaanada noocyadooda kala duwan hadaba waxaad haysataa fursad qaali ah oo aad ku abuuri karto dhaqaalle.
Soomaalida oo kali ma ahan dadka macmacaanka jecel, xittaa waxaan arkay dadka reer Yurub sidda kuwa aan arkay Norway-jiga aad ayey u jecelyihiin macmacaanka sidda doolshada (kake) oo kale, sidaas awgeed halkaas waxaa kujira fursado qaali ah oo aad kaga faa’idi karto farsamadaha aad taqaano.
Siddoo kale dadyowga reer Yurub waxay aad u xiiseeyaan cuntooyinka iyo dhaqamada dadka kale ee soo galootiga ku ah dalalkooda. Haddii aad tahay shaqsi degen Soomaaliya waxaad marqaati ka tahay in Soomaalidu jecelyihiin macmacaanka noocyadiisa kala duwan.
Fursadaha qaaliga ah intaas oo kali kuma koobna, hawshaan waxaad u qaban kartaa dad badan sidda aroosyada, xafladaha soo dhaweynta, iyo shaqsiyaadka raba in si gaar ah loogu sameeyo macmacaanka. Sidoo kale waxaan shaki kujirin in maqaayadaha ay u baahanyihiin cid usoo sameyso oo u keento qibradaan ayaga aysan aqoonin.
Sidoo kale waxaad xariir la sameyni kartaa midowga ardayda Soomaaliyeed ee jooga wadanka aad joogto si mararka ay xaflad qabaan ay kuulla soo xariiraan oo ay kaaga iibsadaan waliba waxaa lagaaga baahanyahay inaad ka dhaadhiciso inaad u sameyn karto tiro inta ay rabaan marwalbo oo ay xaflad qabaan. Laakiin waxaa lagaaga baahanyahay inaad ogaato noocyada macmacaanka ay macaamiishaada jecelyihiin, marwalbana xoogga saar baahida ay qabaan macaamiishaada iyo sawabata ay u jecelyihiin.
Adeegyada qorshaynta aroosyada
Wakhtiyadaan dambe tirada dadka is aroosaayo ayaa kor u kacay sanadihii lasoo dhaafay, waxaa halkaas ka muuqda fursadaha ka ganacsiga hawlahaas qorshaynta ah. Ma aanan sameynin tirokoob rasmi ah balse madamaa aan ahay shaqsi bulshada ku dhexjira hadana waxaan dareemi karaa kobaca tirada guurka.
Haddii aad taqaano qaababka loo qorsheeyo aroosyada, sidda hoolalka lagu qabanaayo aroosyada inaad si fiican u taqaanid qaababka loo qurxiyo. Haddii aadan aqoon fiican u lahayn xittaa waxaad qaadani kartaa koorsooyin ku saabsan hawlaha noocaan oo kale. Waxaadna ka faa’idi kartaa qibrad fiican oo aad ku balaarin karto rajada mustaqbalka ganacsigaaga.
Adeegyada qorsheynta aroosyada ayaa u baahan inaad ku bilawdo qarash-yar oo aan siddaas usii badneyn. Waxa ugu muhiimsan inaad leedahay xarun yar ee lagaaga soo xariiri karo, sidda telefon lambarkaaga, goobta ganacsigaaga waa u muhiim macaamiishaada inay ogadaan.
Dadka aad ayay u jecelyihiin inay arkaan arooskooda oo si qurux badan loo abaabulay, ogaaw qofka guursanaayo ama la guursanaayo inta badan kama welwelaan lacagta ay bixinayaan maxaa yeelay waa qof farxad baxan hayso, waxwalbo oo macquul ah wey bixinayaan ee adiga ku dhaqaaq. Kk.
Waxaan intaas kuu raacinayaa inaad ku darto qeyb qurxinta dumarka iyo raguba, si gabadha aroosada ah iyo wiilka arooska ah ugu qurxin karto. Waxaana wanaagsan inaad qeyb u gaar ah raga u sameyso adigoo illaalinaayo dhaqankeenna suubanaa ee diinta Islaamka.
Qeybta dumarka: Qurxinta iyo jarida cidiyaha, gaagaabinta timaha iyo qurxintooda, cagaha cadaaday iyo soo celinta quruxdooda iwm.
Qeybta raga: jarida iyo qurxinta timaha, dhaqista wajiga iwm.
Adeegyada Xirfadaha Shaqada, ganacsiga iyo Nolosha
Shaqooyinkaan baahida loo qabo aad ayay u badanyihiin laakiin bulsho ahaan Soomaalida ma xiiseeyaan. Adeegyada noocyadaan oo kale marka horre waxaad u baahantahay inaad aqoon fiican u leedahay ganacsiga iyo la talinta. Adeegyada noocyadaan oo kale xittaa uma baahnid inaad xarun furato ee adigoo gurigaaga jooga ama nolol maalmeedkaaga haysta ayaad qaban kartaa.
Haddii aad doonayso inaad bilawdo adeegyada noocaan oo kale waxaad u baahantahay qibrado kala duwan inaad leedahay sidda:
– Waxaad u baahan tahay inaad noqoto mid la aamini karo, ixtiraamo, aan xukun badneyn, heer sare oo sharaf leh.
– Waa inaad noqotaa xiriiriye fiican, oo ay ku jirto awoodda aad u leedahay inaad dhegaysato.
– Inta badan wakhtigaaga waxaad ku kharash gareynaysaa telefoonka ama kulamada.
– Waxaad u baahan tahay inaad u dulqaadato, naxariis iyo dhiirigelin.
– Waxaad u baahan tahay inaad 100% “ahaato” kulan kasta, macaamil kasta, iyadoon loo fiirinaynin noloshaada shakhsi ahaaneed.
Waxaa jira faa’idooyin badan uu xambaarsantahay inaad bilawdo ganacsiga noocaan oo kale. Waxaan la soconaa marwalbo marka aan doonayno inaan bilaawno ganacsi waa inaan marka horre oganaa qiimaha iyo rajada ku jirta in la bilaabo ganacsigaas, hadana hadlkaan hoose waxaan ku xusayaa faa’idooyinka ay xambaarsantahay inaad bilaawdo:
– Waxaad bilaabi kartaa ganacsigaan oo dhan adigoo gurigaaga jooga, macaamiisha waxaad kula xariiri kartaa telefoonka.
– Qiimaha hawshaan lagu qabanaayo ayaa sareysa.
– Haddii aadan aqoon fiican u lahayn hawshaan, waxaad bilaabi kartaa ganacsigaaga intaad tababarka qaadanayso iyo inaad qaadid talaabooyin aad ku heli karto shahaadooyin.
– Waa ganacsi abaalmarin kuu ah oo kuu ogolaanaya inaad isbeddel ku sameyso nolosha dadka kale.
– Waxaad tababari kartaa shakhsiyaadka ama kooxaha.
– Waxaad kobcin kartaa adeegyadaada si aad u hesho dakhliga dheeraadka ah.
Qibradaan ayaa ah mid ay u baahanyihiin cid u qabato ganacsatada Soomaaliyeed oo garan la’ dhibaatada haysata ganacsigooda. Soomaali oo kali ma ahan waxaa kale u baahan dadyowga degan dalkaan Norway ama haddii aad degantahay wadamo kale oo ka baxsan dalkeenna.
Adeegyada harqaanka (dhar tulista)
Haddii aad taqaano ganacsiga harqaanka ‘dhar tulista’ hadaba waxaad haysataa qibrad dheeman ah oo aad kaga macaashi karto. Dhar tulista waa qibrad ay yaqanaan dad badan oo Soomaali ah, waliba si fiican ayay kaga macaashi karaan dadka yaqaano qibradaan. Haddii aad tahay shaqsi kunool gudaha Soomaaliya oo aad xarun furato mise adigoo gurigaaga jooga soo dhex-dhigato harqaan shaku kuma jiro inaad ogtahay in bulshada aad u tushaan dharka jeex-jeexmay iyo waliba tulista diracyada iwm.
Haddii aad magaalada xarun ka furato siddoo kale waa mid aad si fiican ugu faa’idi doonto.
Inta badan macaamiishiisa aad ayay u badanyihiin, kawaran haddii aad si fiican u balaariso oo aad u sameyso xarumo cusub oo soo jiidasho leh, xayaysiina aad ugu sii darto?
Arrintaas jawaabteeda adiga ayaan kaa sugayaa, maxaa yeelay waa ganacsi aan isweydiin lahayn inuu guulaysanaayo ma sheegin wuxuu Alle swc qoray. Soomaalida waxay tiraahdaa “daahane hortiisa dafahane ayaa jooga” ka faa’idayso wakhtiga inta wakkhtigu goor yahay
F.G: Maamulaha guud ee ganacsi walbo oo dunidda ka jira, waxaa wanaagsan innuu illaaliyo anshaxa wanaagsan, kana illaali ganacsigaaga wax isdaba marinta, waa inaad fahantaa dhaqamada caalamka, siyaasada dalka ka jirta, isbedelka lacagaha iyo guud ahaan canshuuraha wadanka aad ku nooshahay.
Tags: 5-Fursado Ganacsi Aad Bilaabi Karto MaantaWaliba Adigoo Gurigaaga Jooga!
Next post Ma'ogtahay Inay Bulshadaada Kuu baahantahay?
Previous post Dheecaannada Jirka Iyo Baaritaankooda